प्रवास – Page2– Pahilo Page
जीवन शर्मासहितको टोली नयाँ वर्ष साँस्कृतिक साँझका लागि जापानमा
जापान, १४ पुस । अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जापानमा हुने विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रममा लागि रक्तिम साँस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष तथा चर्चित जनवादी गायक जीवन शर्मासहितको कलाकार टोली जापान पुगेको छ । कलाकारहरुको उक्त टोलीले ३१ डिसेम्बर २०१८ मा ओसाका र १ जनवरी २०१९ का दिन टोकियोमा भव्य प्रस्तुति रहेको बताइएको छ । जा...
जापान, १४ पुस । बागलुङको गल्कोटमा आँखा अस्पताल बनाउन जापानमा नयाँ वर्ष साङ्गीतिक साँझ हुने भएको छ । साङ्गीतिक साँझको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ । अंगे्रजी नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा जापानको सिजुओकामा हुन लागेको साङ्गीतिक साँझको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गल्कोट समाज जापानले नयाँ बर्षको अव...
काठमाडौं, १० पुस । तीनदशक भन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहेका नेपाली मूलका पहिलो कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी पाँचौंपटक सुपरलयर छानिएका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको रेटिङ गर्दै आएको अमेरिकाको चर्चित सुपर लयर्स नामको रेटिङ कम्पनीले जीसीलाई सन् २०१४ देखि लगातार सुपरलयरको रेटिङमा राख्दै आएको छ । थोम्...
कुवेत, २८ मंसिर । सुनौला सपना बोकेर कुवेत पुगेका दाङको हापुर नारेवाङका २६ वर्षीय लक्ष्मणबहादुर खत्रीको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । गत नोभेम्बर २३ तारिख २०१८ का दिन दुर्घटनामा परी घाइते भएका खत्रीको उपचारका क्रममा ७ डिसेम्बरका दिन अस्पतालमै निधन भएको हो । मृतक खत्री पछिल्लो समय कुवेतमा अवैधानिकरुपमा काम गर्दै ...
मलेसिया (क्वालालाम्पुर), २७ मङ्सिर । लागू औषध कारोबारको झुठो अभियोगमा जेल परेका एक नेपाली युवकको मलेसियाबाट उद्धार गरिएको छ । २०७२ साल माघमा रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका राप्ती नगरपालिका ४ चितवनका सागर गुरुङ गत अप्रिल महिनामा जेल परेका थिए । निर्दोष हुँदाहुँदै पनि मलेसियाली लागू औषध कारोबारीहरुको षड्यन्त्रमा झुठो म...
जापान, २६ कार्तिक । नेपाली कागे्रसको विदेशस्थित भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको सिजुओका क्षेत्रीय कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । हालै सम्पन्न अधिवशेनले सिजुओका क्षेत्रीय कमिटीको सभापतिमा रुपक बस्नेतलाई चयन गरेको छ । कमिटीको उपसभापतिमा सरोज बुढाथोकी र कैलाश थापा रहेका छन् । त्यसैगरी सचिव सुमन पौडेल, उपसच...
कुवेतमा शिल्पी संघ नेपालको अधिवेशन हुने : ‘दलित’ शव्दसँगै विमति
कुवेत, ८ मंसिर । वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेतमा रहेका नेपालीहरुको संस्था ‘शिल्पी संघ नेपाल कुवेत’ले अधिवेशन गर्ने भएको छ । यसअघि गोपाल गदाइलीको नेतृत्वमा उक्त संघ गठन भएको थियो । राज्यले दलितको सीमारेखा निर्धारण गरेर शिल्पी समुदायहरुलाई ‘दलित’का नाममा सीमित गर्दै उपेक्षा गर्न खोजेकोले त्यसको बिरुद्ध यो संगठन निर्माण ...
रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी नेपाली चेलीको दुःखद निधन
कुवेत, ११ असोज । कुवेतमा एक नेपाली महिलाको निधन भएको छ । बेलवारी ५ मोरङकी अन्दाजी ३९ वर्षीया फूलमाया बिकको मंगलवार बिहान जिलिवमा करेन्ट लागेर निधन भएको जनाइएको छ । घरेलु कामदारको रुपमा करिव ७ महिना पहिले कुवेत आएकी फूलमाया आइतवार मात्र स्पोन्सरको घरबाट भागेर इलिगल भई जिलिव पुगेर कामको खोजीमा बसेको जनाइएको छ । फूल...
काठमाडौं, ९ असोज । कुवेतमा घरेलु महिला कामदारको रुपमा रोजगारीका लागि पुगेकी सुनसरीकी ४५ बर्षीया पेशलमाया राईको कुवेती साहुको छोराले छुरी प्रहार गरी हत्या गरेको छ । राहदानी नं. ०६५५६१९६ र नेपाली नागरिकता नं. २४८०९ (सुनसरी) रहेकी पेशलमाया राईको ३ अगस्ट २०१८, शुक्रबारका दिन आफूले काम गर्ने घरकै साहुका छोराले छुरा प्रहार ग...
साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपालीको न्यूनतम ज्याला बढेको छ । अब साउदी जाने नेपाली कामदारले मासिक न्यूनतम ज्याला न्यूनतम १००० रियाल (३० हजार रुपैयाँ) र खाना भत्ता ३०० रियाल (९ हजार रुपैयाँ) पाउने छन् । त्यस्तै अधिकतम ज्याला ११००० रियाल (३ लाख ३० हजार रुपैयाँ) र खानाभत्ता ५०० रियाल (१५ हजार रुपैयाँ) पाउनेछन् । श...